Nchọgharị olu na Cusp nke Azụmaahịa Agbanwe? | Martech Zone
The Ihe ngosi Amazon nwere ike ịbụ ihe kacha mma m zụrụ na ọnwa 12 gara aga. Azụrụ m mama m, onye bi n'ime ime obodo ma nwee nsogbu gbasara mkparịta ụka mkpanaka. Ugbu a, ọ nwere ike ịgwa Ngosi ahụ ịkpọ m ma anyị na-akpọ oku vidiyo n'ime sekọnd. Mama m hụrụ ya n'anya nke ukwuu nke na ọ zụrụ otu maka ụmụ ụmụ ya ka ya na ya wee nwee ike ịkpọtụrụ ha. M na-enwe ike dobe na-asịkwa nkịta m, Gambino, ma m pụọ nwa oge. Ọ na-ahụ m, na-agba agba, na-elekwa anya n'azụ ngwaọrụ ahụ iji hụ otú m si tinye ebe ahụ.
Homepod nke Apple naanị gara ire dị ka nhọrọ dị oke ọnụ na onye nwere ọgụgụ isi nwere ọgụgụ isi yana ijikọ iOS ọnụ. Na Ụlọ Google bụ oké ọnụ ngwọta na gam akporo mwekota. Asọmpi niile dị egwu. Mgbe m bụ nwa Apple, m na-atụ ụjọ na ọdịnala nke njikwa nke Apple nwere ike ịhapụ ha agha olu ogologo oge. Amazon nwere incredibly oghe ije na ọtụtụ iri ọtụtụ puku nkà dị adị iji nwee mmekọrịta yana ọrụ ma ọ bụ ngwaọrụ ọ bụla.
Ọ bụrụ na ị nọ na Siri ma denye aha anyị na pọdkastị anyị, ị nwere ike ịjụ Siri ka Gwuo Podcast Ajụjụ Ọnụ Podcast!
Ọ bụrụ na ịnọ na Homelọ Google, ị nwere ike ikwu Kpọọ Podcast Podcast na nke kacha ọhụrụ!
Maka Amazon, gbakwunye AnyPod nkà ma jụọ, Alexa, Alexa, jụọ AnyPod ka ị debanye aha na ajụjụ ọnụ Martech.
Laghachi ịzụ omume… Capgemini nyocha ihe karịrị ndị ahịa 5,000 na US, UK, France na Germany ịchọpụta etu ha si eji ngwaọrụ igwe na-emekọrịta ihe - kpọmkwem banyere ịzụta omume. Ejikọtara nyocha ọnụọgụ ahụ na mkparịta ụka otu elebara anya na ndị ahịa si mba ọ bụla, na-eduzi nke ọma. Nyocha a - yana mkparịta ụka ndị na-elekwasị anya - nwere njikọ dị mma nke igwe mmadụ na onye ọrụ / onye na-abụghị onye ọrụ.
Ndị na-enyere olu aka ga-agbanwe kpamkpam ụdị ndị ahịa na ndị ahịa na-emekọrịta ihe. Ihe na-eme ka ndị na-enyere olu aka bụrụ ihe na-atọ ụtọ bụ na etinyere ha na ndụ anyị, na-enye ịdị mfe na ụba nke mmekọrịta nke ndị na-azụ ahịa enwetụbeghị mbụ. Dị ndị nwere ike ịmasị nnukwu agụụ na-azụ ndị ahịa na-enyere ndị na-enyere aka aka aka agaghị eme ka ha na ndị ahịa ha nwee mmekọrịta chiri anya, mana mekwaa ohere dị ukwuu maka onwe ha. Mark Taylor, Chief Experience Officer, Digital Customer Experience practice, na Capgemini
Nchoputa nke ndi ahia ahia na Voice Commerce:
Ndị na-enyere aka na olu ga-agbanwe ecommerce - Ndị na-azụ ahịa na-azụlite nhọrọ siri ike maka iso ụlọ ọrụ na-emekọrịta ihe site na ndị enyemaka olu. Ndị ọrụ enyemaka olu na-emefu 3% nke ngụkọta mmefu ha niile site na enyemaka ndị olu, mana a na-atụ anya na nke a ga-abawanye na 18% n'ime afọ atọ sochirinụ, na-ebelata òkè nke ụlọ ahịa anụ ahụ (45%) na weebụsaịtị (37%) Mgbe egwu egwu na ịchọ ihe ọmụma bụ ihe eji ewu ewu maka ndị enyemaka olu taa, ihe karịrị otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ndị zaghachirinụ (35%) ejirila ha zụta ngwaahịa dịka nri, nlekọta ụlọ na uwe.
Ndị ahịa nwere afọ ojuju dị ukwuu site na ahụmịhe olu inyeaka - Ndị na-eji olu olu na-eme ihe dị mma banyere ahụmịhe ha, na 71% na-enwe afọ ojuju na enyemaka olu ha. Karịsịa, 52% nke ndị na-azụ ahịa kwupụtara ịdị mma, ikike ịme ihe na-enweghị aka (48%), na akpaaka nke ọrụ ịzụ ahịa na-aga (41%) dị ka nnukwu ihe kpatara ha ji ahọrọ iji enyemaka olu karịa ngwa ngwa na weebụsaịtị. Ikike nke onye inyeaka olu ịghọta onye ọrụ ha bụ mmadụ dịkwa oke mkpa; 81% nke ndị ọrụ chọrọ ka onye enyemaka olu ghọta ha okwu na ụda olu ha.
Ndị na-enyere olu aka ga-enye nnukwu uru maka ndị na-ere ahịa na ụdị - Dị ndị na-enye ezigbo ahụmịhe nke inyeaka olu ga-eweta azụmaahịa na nkwukọrịta okwu dị mma. Nkwupụta ahụ chọpụtara na 37% nke ndị ọrụ enyemaka olu ga-ekerịta ahụmịhe dị mma na ndị enyi na ezinụlọ, yana ọbụlagodi 28% nke ndị na-abụghị ndị ọrụ ugbu a ga-achọ ịmekọrịta ugboro ugboro na akara na-esote ahụmịhe dị mma. Nke a dị ka uru ego bara ụba, ebe ndị ahịa dị njikere iji 5% karịa na akara na-eso ezigbo ahụmịhe na onye enyemaka olu.
Ihe nchoputa nke Capgemini bu na ndi otu ahia kwesiri iru ngwa ngwa iji cheputa uda olu Azụmaahịa Mkparịta ụka atụmatụ.
Ngosipụta: Ana m eji njikọ njikọ m na post a!
Tags: amazon Alexaamazon echoamazon gosianypodapụl homepodokpumkparịta ụkaGoogle googlenkà PodcastSiriaoluazụmahịa olunyocha olu